विकास बैंकको भूमिका र पहिचान स्थापित गराउनु छ - Karobar National Economic Daily
विकास बैंकको भूमिका र पहिचान स्थापित गराउनु छ
query_builderMay 17, 2017 11:09 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility796
डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरतराज ढकाल । तस्विर : पुर्णिमा श्रेष्ठ
केही दिनअघि मात्र डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका भरतराज ढकाल मुक्तिनाथ विकास बंैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सहकारीबाट करिअर सुरु गरेका ढकाल मुक्तिनाथ विकास बैंकको स्थापनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।
तीनजिल्ले बैंकदेखि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंंक हुँदासम्मको अनुभव सँगालेका ढकालले व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । संस्था जन्माएर आजको दिनसम्म ल्याउन धेरै चुनौती सामना गरेको बताउने ढकाल बैंकरका साथसाथै समाजसेवी पनि हुन् । असल नियत राखेर काम गरे नेपालमा धेरै अवसर रहेको उनको बुझाइ छ ।
देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा विकास बैंकहरूले पनि सोहीअनुसार सेवा प्रदान गर्न तयार हुनुपर्ने बताउने उनी डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनमार्फत संघीय ढाँचामा विकास बैंकलाई ढाल्ने योजनामा देखिन्छन् ।
वित्तीय संस्थाहरूको भीडमा विकास बैंकको पहिचान स्थापित गराउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । डेभलपमेन्ट बैंकर संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकालसँग समग्र वित्तीय प्रणालीसहित विकास बैंकका अवसर तथा चुनौतीका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :
भर्खरै मात्र डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनको अध्यक्षमा चुनिनुभएको छ । तपाईंका नयाँ योजना पनि होलान् । विकास बैंकहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउने योजना के छन् ?
तीन जिल्ले विकास बैंकदेखि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकसम्म काम गरेको अनुभव भएकाले साथीहरूले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ । हाल देश नै पुनर्संरचना हुने क्रममा रहेकाले विकास बैंकको महत्व पहिचान गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
देशमा स्थानीय सरकार पनि गठन हुने अवस्थामा रहेकाले विकास बैंकको महत्व स्थापित गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । विकास बैंकलाई जनस्तरसम्म पुर्रयाएर नेपालको वित्तीय पहुँच विस्तारमा विकास बैंकको भूमिका अग्रणी स्तरमा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
हाल रहेका प्रक्रियागत कमजोरीलाई हटाएर देशको अर्थतन्त्रमा विकास बैंकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यसले पनि अन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै गएको छ ।
आयातित सामग्रीको उपभोग धेरै गर्ने प्रचलन बढेको छ । त्यसलाई कम गर्न कृषि उत्पादन बढाउनका लागि विकास बैंक राम्रो माध्यम बन्न सक्छ भन्ने स्थापित गराउनुछ ।
भोलिका दिनमा विकास बैंक रहँदैनन् कि भन्ने त्रास पनि कतै–कतै देखिन्छ । यो त्रास मेटाउँदै नेपालको माटो सुहाउँदो काम गरी विकास बैंक स्थापित हुनेछन् ।
ग्रामीण भेगमा लघुवित्त र सहरी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरू छन् । विकास बैंकको उपस्थिति कहाँ हुनुपर्ने हो, हालको सन्दर्भमा विकास बैंक साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएका हुन् ?
विकास बैंकलाई यो चुनौती हो । यो अवस्थामा विकास बैंकले व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सकेको खण्डमा धेरै अवसर पनि छन् । हाल धेरैजसो विकास बैंकले लघुवित्तसँगै बैंकिङ सेवा पनि प्रदान गर्दै आएका छन् ।
विकास बैंकले दूर दराजमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुका साथै काठमाडौंमा बसेर वाणिज्य बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ । हामीसँग चुनौती र अवसर दुवै छन् । सहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी रूपमा काम गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय प्रदान गरेको खण्डमा विकास बैंकप्रतिको विश्वास बढ्न जान्छ । यसरी विश्वास बढेको अवस्थामा नियमनकारी निकायबाट पाउने सहुलियत लिन पनि सहज हुन्छ ।
सहरी क्षेत्रमा पनि विकास बैंकका शाखा आवश्यक छ । ग्रामीण भेगका ग्राहक सहरमा आउँदा सोही बैंकवाट सेवा पाउन सकोस् । व्यवसायका लागि विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसाय पनि राम्रो र प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ । यी दुवै विषयलाई एकसाथ लैजान सकेको खण्डमा अवसर धेरै हुन्छन् ।
विकास बैंकलाई ग्राहक पहिचान गर्न नै चुनौतीपूर्ण छ भनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
वाणिज्य बैंकमा भन्दा विकास बैंकमा केही धेरै सुविधा हुने भएकाले नआउने भन्ने हुँदैन । ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दा कस्तो व्यवहार गर्छौं भन्नेमा पनि भर पर्छ । काठमाडौंमा बस्ने मानिसको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने गाउँबाट बसाइँ सरेका हुन् ।
सबैको भावना तथा सम्बन्ध जन्मेको स्थानमा हुन्छ । जन्मस्थानमा सेवा दिएको बैंकलाई माया गर्छन् । साथै, बैंकको सेवा–सुविधा पनि स्वीकार गर्छन् । विश्वास पनि गर्छन् । मानिसको भावना जित्न सकेको खण्डममा ब्याजदर मात्र हेर्दैनन् ।
जस्तो हामीले एक कप कफीको ५ सय पनि तिरेका हुन्छौं, कहीँ ५० रुपैयाँ मात्र तिर्दा पनि महँगो भयो कि भन्ने हुन्छ । त्यसैले ग्राहकलाई चित्त बुझाउन सकेको खण्डमा व्यवसाय विस्तारमा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर निकै छिटो उतारचढाव हुने गरेको देखिन्छ । यो समस्याबाट तुलनात्मक रूपमा विकास बैंक धेरै पीडित भएको भनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदरको कुरा गर्दा लाजमर्दो छ । आजभन्दा एक वर्षअघि बैंकहरूले ६ देखि ७ प्रतिशतमा कर्जा अफर गरेका थिए । हाल तीनै बैंकहरूले दोब्बर ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका प्रमाण हामीसँग छन् ।
यसले हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अस्थिर छ भन्ने बुझाउँछ । त्यसका साथै बैंक–वित्तीय संस्थाले पनि व्यवस्थित रूपमा कारोबार नगरेका हुन् भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको अवस्था हो । बैंकहरूले अवस्थाको वहन विश्लेषण नगरेका हुन् कि भन्ने लाग्छ ।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्दो गतिमा थियो । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्यामा कमी आउनुका साथै रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा पनि कमी आएको छ । त्यसका साथै आन्तरिक उत्पादन निकै कमजोर भएको छ । खाद्यान्नमा पनि परनिर्भर भएको अवस्था छ । परम्परागत कृषि प्रणालीले काम गर्न सक्दैन ।
आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्था छ । सर्वसाधारणमा विलासी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । उत्पादन कम भए पनि व्यापारघाटा बढेको छ । त्यसका साथै वर्षअनुसार नयाँ सरकार आउने प्रवृत्ति छ । सरकारले राजस्व उठाएको छ । तर, त्यो अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसले पनि अस्थिर ब्याजदर हुनमा सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ ।
हाल मूल्य वृद्धिदर सामान्य अवस्थामा आएको भनिएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचक हालकै अवस्थामा रहेको खण्डमा भोलिका दिनमा पुनः मूल्यवृद्धि झनै बढेर जान सक्ने सम्भावना छ । बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि भएकाले व्यवसाय विस्तारका लागि तँछाडमछाड गर्दै हिँडेको अवस्था छ ।
निक्षेपको वृद्धिदर घट्दै जाने र कर्जाको वृद्धिदर बढाउनुपर्ने हुँदा भोलिका दिनमा अझै असन्तुलन हुने हो कि ? अब बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा दीर्घकालीन फाइदाका साथै अर्थतन्त्रमा पनि योगदान हुने क्षेत्र खोज्नु जरुरी छ । त्यसका साथै सरकारले पनि आफ्ना खर्च गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । सबै व्यवसायीले पारदर्शी रूपमा काम गरेको खण्डमा ब्याजदरमा पनि सन्तुलन आउँछ ।
सधैं यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी कसले गर्ने भन्ने कुरा आउँछन् । यसका लागि सबै सन्तुलित भएर काम गर्नु आवश्यक छ ।
केन्द्रीय बैंकले बचतको भन्दा कल डिपोजिटको ब्याजदर धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदरको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैैंकले नियन्त्रण गर्नु कत्तिको उपयुक्त हो ?
बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गरे । त्योअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि पैसा चाहियो । ठूलो आकारमा पैसा चाहिएको हुनाले ब्याजदर पनि सोही अनुसार बढाउनुपर्याे। त्यसकारण बैंकहरूले कल डिपोजिटलाई आधार बनाएर निक्षेप संकलन गर्ने काम गरे । त्यसमा ठूला निक्षेपकर्ताले ब्याज पाउने र सानाले नपाउने अवस्था आयो ।
त्यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले बचतको ब्याजभन्दा कल डिपोजिटको थोरै हुनुपर्ने नीति ल्याएको हो । त्यो नीतिअनुसार बैंक वित्तीय संस्थालाई बचतको ब्याजदर ह्वात्तै बढाउ भनेको पनि होइन । समावेशी बनाउन मात्र भनेको हो । त्यो नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । केही वाणिज्य बैंकले बचतमा ह्वात्तै ब्याजदर बढाएर ८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
विगतमा विकास बैंक जोखिम भन्ने गरिन्थ्यो । तर, हालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्यालाई आधार मान्दा विकास बैंक धेरै कम्फर्टेबल अवस्थामा छन् । विकास बैंक साना तथा पब्लिक निक्षेपकर्ता धेरै भएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा बजारलाई असन्तुलित बनाउनमा धेरै भूमिका वाणिज्य बैंकहरूको देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको पुँजी चलाउने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले हामीले गर्ने निर्णयले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विश्लेषण नगर्दा समग्र नकारात्मक प्रभाव मात्र पार्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले सोचेभन्दा फरक तरिकाबाट ब्याजदर गएको छ । यसले भोलिका दिनमा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । हालको अवस्थामा विकास बैंकहरूले जिम्मेवार भएर निर्णय गरेको पाएको छु । यस सन्दर्भमा ठूला वाणिज्य बैंकहरूले बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातको समस्या विकास बैंकमा देखिएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
समग्रमा सीसीडी रेसियोको समस्या कसैलाई पनि परेन भन्न खोजेको होइन । यसको असर विकास बैंकहरूमा पनि देखिएको हो । अहिले पछिल्लो क्रममा सीसीडीमा केन्द्रीय बैंकले केही लचकता अपनाएको छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा तथा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा गरेको लगानीको ५० प्रतिशत सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने बनाएको छ । यसले राम्रो नै भएको थियो । हाल निक्षेप बढाउन सक्ने अवस्था कमजोर कन्दै गएको छ ।
हालको अवस्थामा ब्याजदर एकैपट बढाउनभन्दा केन्द्रीय बैंकसँग बसेर छलफल गर्न सक्थ्यौं । केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियतलाई केही समय थप गर्न अनुरोध गर्न सक्थ्यौं । राष्ट्र बैंकले पनि हाम्रा कुरालाई सकारात्मक रूपमा नै लिन्छ भन्ने लाग्छ ।
अस्वस्थ रूपले अघि बढेको भन्ने लाग्छ । सन्तुलित रूपमा अघि बढेर नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरेर गएको अवस्थामा ठूलो कठिनाइ हुँदैनथ्यो । कर्जाको ब्याजदर मागभन्दा पनि बैंकहरूले फोर्सफुल्ली बढाएको अवस्था छ । यसमा सन्तुलन ल्याउनका लागि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । साना कर्जालाई फोकस गर्नुपर्छ ।
व्यवसाय बढाउने नाममा बढी कर्जा लगानी गर्नुभन्दा पनि वित्तीय प्रणालीबाट गएको पैसा फर्कन्छ कि फर्कंदैन भन्ने कुरालाई पनि हेरेको खण्डमा सन्तुलन आउँछ ।
नत्र अझै केही समयका लागि केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोको विषयमा सोच्नुपर्छ । बैंक मध्यस्थकर्ता भएकाले लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । अर्थतत्रको आकार हेरेर लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्छ ।
निक्षेपको समस्या हुँदा वाणिज्य बैंकहरूले भद्र सहमति गरेर ब्याजदरको उच्च बिन्दु पनि तोके । तर, निक्षेप लिने बेलामा त्योभन्दा धेरै ब्याजदरमा पनि लिए । विकास बैंकहरूले पनि यस्तो गरे होलान् नि ?
संस्थाहरूले आ–आफ्नो नीतिअनुसार काम गर्ने हो । ब्याजदरका सन्दर्भमा प्रकाशितभन्दा ०.५ प्रतिशतभन्दा धेरै दिन नपाइने भनेर केन्द्रीय बैंकले प्रस्ट रूपमा भनेको छ । यदि योभन्दा धेरै लिएको खण्डमा संस्थागत सुशासनभन्दा बाहिर जान्छ ।
त्यसरी गरे भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि कसैले गरेको छ भने त्यो राम्रो होइन । वित्तीय क्षेत्र भनेको विश्वासको मन्दिर हो । विश्वासलाई तोडमोड गर्नु हुँदैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने विकास बैंकको निक्षेपको ब्याजदर वाणिज्य बैंकको भन्दा थोरै भएको पनि छ ।
त्यसैले ब्याजदर निर्धारण गर्दा संस्थाको अवस्थाले पनि फरक पार्छ । बैंक वित्तीय संस्था पारदर्शी क्षेत्र भएकाले संस्थागत निर्णय गरेर नियमभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूले ब्याजदर बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघटाउने गरेको गुनासो छ नि ?
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बैंक र ऋणीको अपसी सहमति हो । बैंकले ब्याजदर बढाउँदा एकैपटक बढाउन पनि मिल्दैन । त्यसमा स्प्रेड रेट पनि हुन्छ । त्यसका साथै ब्याजदर घटाउन बढाउन नपाइने भनेर त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन ।
खुला अर्थतन्त्रबमोजिम हामी जाने हो भने ग्राहकलाई सन्तुष्टि नदिएको खण्डमा ग्राहकले अर्को संस्थाबाट सेवा लिन जान्छ । बजारको अवस्थाअनुसार ग्राहकलाई चित्त नबुझ्ने निर्णय पनि गर्नुपर्छ । यस्तो भएको छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । कहिलेकाहीँ भएका कुरालाई सधैं लिइरहनु हुँदैन ।
वित्तीय प्रणालीको अवस्थाअनुसार ब्याजदर घटबढ हुनसक्छ भनेर नै कर्जा दिएका हुन्छौं । त्यसमा पनि बैंकहरूले अस्वाभाविक बढाउने घटाउने रूपमा गर्नु हुँदैन । स्वाभाविक ब्याजदर निर्धारण गरेर ग्राहकलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी गर्नुपर्छ ।
पुँजीको हिसाबमा आजको राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हिजोको वाणिज्य बैंक भएको छ । तर, पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न दिएको छैन । यसमा तपाईंको नेतृत्वको डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनले कसरी जाने योजना बनाएको छ ?
विकास बैंकको क्षमताअनुसार गर्न सक्ने कामको माग गर्ने हो । हामीले माग गरेका सबै कुरा राष्ट्र बैंकले दिन्छ भन्ने पनि हँुदैन । हिजोका दिनमा पनि एसोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्षले यो विषयमा कुरा उठाउँदै आउनुभएको थियो ।
विकास बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय एलसी खोल्न नदिए पनि राष्ट्रिय दिन आग्रह गरेका छौं । आज विकास बैंकले पनि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्था छ । पुँजी बढाउनु भनेको जोखिम कम गर्नु हो । त्यसका साथै विकास बैंकहरूले कर्मचारी पनि त्यही किसिमबाट विकास गरेकाले संस्थाको क्षमताअनुसारको काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो ।
विकास बैंकले त्यस्ता सेवा प्रदान गर्ने जिम्मा लिएर ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रदान गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । वाणिज्य बैंकले गरेका सबै काम विकास बैंकले गर्न पाउनुपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले दिन्छ भन्ने पनि लाग्दैन ।
विकास बैंकहरूले कमी–कमजोरी सुधार गरी क्षमता विस्तार गरी सेवा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले पनि काम गर्ने अनुमति दिन्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईं मुक्तिनाथ विकास बैंकको स्थापनाकालदेखि हुनुहुन्छ । विकास बैंकहरूमा तपाईंको बैंक उत्कृष्टमध्ये एकमा गनिन्छ । सेयर बजारमा पनि मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयर सबैको रोजाइमा पर्छ । बैंक स्थापनाको करिब एक दशकको अवधिमा यो कसरी सम्भव भयो ?
हामीले बैंकिङ सेवा सुरु गर्दा नै नेपाली समाजअनुसारको मोडल बनाएर गरेका थियौं । किनभने हाम्रो देश भनेको गाउँ, सहर तथा अर्धसहरी क्षेत्र मिलेर बनेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले स्याङ्जाबाट कारोबार सुरु गरेको हो ।
त्यो समयमा स्याङ्जा, कास्की र तनहँु गरी तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र थियो । बैंक भनेको धनीका लागि मात्र नभई गरिबका लागि पनि हो । सबैलाई सेवा दिने उद्देश्य राखेका थियौं । त्यो समयमा हामीले जनता बैंकमा भन्दा पनि बैंक जनताकोमा जानुपर्छ भन्ने नारा नै बनाएका थियौं ।
त्यसका साथै एक व्यक्ति एक बचत खाता र एक परिवार एक सफल उद्यमी भनेर बैंकिङ सेवा सुरु गरेका थियौं । खास गरी मुक्तिनाथ विकास बैंकले लघुवित्तीय सेवासहित आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान सुरु गरेको हो ।
हामीले तीन मोडलबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरेका थियौं । ती आधुनिक बैंकिङ, ग्रामीण बैंकिङ र लघुवित्त सेवा हुन् । साथै, कुल जनसंख्यामा आधाभन्दा धेरै महिला भएकाले महिलालाई उद्यमी बनाउनु पर्ने योजनामा हामी रह्यौं ।
यो बैंक नेपालका लागि मोडल संस्था हो । हाम्रो योजना एसियामै नमुना बन्नेछ । बैंकका वित्तीय सूचकहरू, ग्राहक संख्या तथा पूर्वाधारका हिसाबले सक्षम र सकारात्मक छौं । सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता कम्पनी छानेर लगानी गर्ने प्रवृद्धिको विकास भएकाले पनि सबैको रोजाइमा मुक्तिनाथ परेको हुनसक्छ ।
लगानीकर्ताले व्यवस्थापनालाई विश्वास गरेर लगानी गरेकाले आजको दिन सम्भव भएको हो । विकास बैंक मध्य मुक्तिनाथ एक मात्र बैंक होला, जसले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर मार्फत २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याएको छ । र, तत्कालका लागि मर्जरमा जाने योजना पनि छैन ।
बैंकको पछिल्लो कार्यसम्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
हाल बैंकको कुल निक्षेप १५ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । १४ अर्बभन्दा धेरै लगानी गरेको छ । बैंकको सञ्चालन नाफा ५५ करोडभन्दा धेरै छ भने खुद नाफा ३५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ । बैंकका ग्राहकको संख्या ३ लाखभन्दा धेरै छ ।
हाल बैंकका ५८ वटा शाखा छन् । अर्को वर्षसम्ममा बैंकका कुल शाखा संख्या १ सय पुग्नेछ । बैंकको खराब कर्जा ०.०१ प्रतिशत छ । कुल लगानीको २८ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकले प्रदान गरेको लघुवित्त सेवामा १ लाख ५ हजार गाहक रहेका छन् । तीमध्ये ७५ हजार सदस्यलाई ४ अर्बभन्दा धेरै कर्जा दिएका छौं ।
यसमा भाखा नाघेको कर्जा पनि निकै कम छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायी रूपमा अघि बढाउने हो भने ग्राहक बैंकमा आएर मात्र नभई जनताको घरदैलोमा गएर पुँजी परिचालन गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ ।
पैसा भनेको मानिस जन्मनुभन्दा अघि र मृत्युपछि पनि आवश्यक पर्ने भएकाले पुँजी सक्रिय बनाउन हामी पनि सक्रिय हुनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । संस्थागत सुशासनलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । ग्राकहका मागअनुसारका योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसका साथै लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंक वाणिज्य बैंक विकास बैंक राष्ट्र बैैंक